ပန်ဒိုရာ: May 2015
ကဗျာထဲက ယဉ်ကျေးမှုအရ အငြင်းပွားဖွယ် စကားလုံးများ
အင်တာနက်ထဲမှာ တွေ့ရတဲ့ ကဗျာတွေထဲမှာ သတိထားမိတဲ့ အချက်တစ်ချက်ကတော့ လူမှုဝန်းကျင်ရဲ့ အသားကျနေတဲ့ ထုံးတမ်းစဉ်လာကနေ ခွဲထွက်လာတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေ၊ အယူအဆတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သတင်းစာတွေထဲမှာ ပြောလေ့ရှိတဲ့ စကားအတိုင်းဆိုရင်တော့ မြန်မာ့ယဉ်ကျေးမှုနဲ့ ဖီလာဆန့်ကျင်နေတယ်လို့ ဆိုရပါမယ်။ ဂန္ထဝင်ကဗျာယဉ်ကျေးမှု၊ ကဗျာ့ထုံးတမ်းစဉ်လာ၊ ဆန်းကျမ်းတွေနဲ့ တိုင်းတာမယ်ဆိုရင်လည်း ကဗျာရေးတဲ့အခါ ဒီလို ရေးသားမှုတွေကို စကားလုံးကြမ်းတမ်းတဲ့ ဂါမ္မဒေါသသင့်တယ်လို့ ဆိုကြပါလိမ့်မယ်။
မြန်မာစကားမှာ ယဉ်ကျေးမှု ဆိုတဲ့ ဝေါဟာရကိုက မရှင်းမရှင်း ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ polite (ယဉ်ကျေးသိမ်မွေ့တယ်) ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်နဲ့ civilization (ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ သမိုင်းယဉ်ကျေးမှု အလေ့အထ) ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို ရောရောထွေးထွေး ပြောတတ်ကြပါတယ်။ ကဗျာဟာ polite ဖြစ်စရာ မဖြစ်မနေ လိုအပ်ပါသလား။ civilization ဟာ ပြောင်းလဲတတ်တယ်ဆိုရင် ကဗျာ့ civilization ထဲမှာ ဘယ်ဟာက polite ဖြစ်တယ် ဘယ်ဟာက polite မဖြစ်ဘူး ဆိုတဲ့ လူတွေရဲ့ သတ်မှတ်ချက်နဲ့ အယူအဆတွေကရော အမြဲတစေ တသမတ်တည်း ဖြစ်နေနိုင်ပါဦးမလား။ ဒါတွေဟာ စဉ်းစားစရာ ဖြစ်လာပါတယ်။ ပြောင်းလဲတတ်တဲ့ ယဉ်ကျေးမှုစံ၊ တန်ဖိုးတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ ပြောဆိုရတာ အင်မတန် ခက်ခဲလှပါတယ်။
မသင့်တော်ဘူးလို့ ယူဆကြတဲ့ စကားလုံးတွေကို ပုံနှိပ်မီဒီယာထက် အင်တာနက်ထဲက ကဗျာတွေထဲမှာ အဓိက မြင်တွေ့လာရခြင်းရဲ့ အကြောင်းရင်းတစ်ခုက လွတ်လပ်မှုနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ ဒီလို ရေးသားလာကြတာ ယနေ့ခေတ်မှ လို့တော့ တပ်အပ်ပြောရတာ ခက်ပါတယ်။ ပုံနှိပ်မီဒီယာမှာရေးကြတဲ့ ကဗျာဆရာတွေထဲမှာလည်း ယခင်ကတည်းက ဒီလို ရေးသားခဲ့ကြတာမျိုး ရှိနိုင်ပေမဲ့ အများပြည်သူ ဖတ်ရှုနိုင်တဲ့ နေရာတွေမှာ မြင်တွေ့ခွင့်ရဖို့တော့ ခက်ခဲပါတယ်။ (၁) စိစစ်ရေးကြောင့်ပါ။ (၂) အယ်ဒီတာတွေရှိလို့ပါ။ အခုအချိန်ကာလမှာတော့ စိစစ်ရေး မရှိတော့ပေမဲ့ အယ်ဒီတာတွေ ရှိနေပါသေးတယ်။ လူမှုဝန်းကျင်အတွက် အငြင်းပွားဖွယ် အရေးအသားတွေနဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို ပုံနှိပ်စာစောင်ပေါ်ကို ဖြတ်သန်းပေးဖို့ အယ်ဒီတာ့အနေနဲ့ ခက်ခဲနေဦးမှာပါ။
ဒီနေရာမှာ ကဗျာရည်ရွယ်ချက်က အရေးကြီးတယ်လို့ ယူဆပါတယ်။ ဖတ်သူတွေရဲ့ စိတ်ဝင်စားမှုကို ရအောင် တမင်ရေးသားကြတယ်၊ တစ်ယောက်ရေးလို့ အားကျမခံ လိုက်ရေးတယ်လို့ ထင်မြင်စရာတွေလည်း အများကြီး ရှိပါတယ်။ တချို့က တီထွင်စမ်းသပ်မှု ကဗျာ့နည်းစနစ်ဆိုင်ရာ၊ ကဗျာဝါဒဆိုင်ရာကြောင့် ရေးသားကြတာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ အမေရိကန် flarf ကဗျာဆရာမ နာဒါဂေါဒင်က ကဗျာထဲကို ထည့်ရေးဖို့ မသင့်တော်ဘူး လို့ ယူဆကြတဲ့ စကားလုံးတွေကို သူတို့ရဲ့ flarf ကဗျာတွေမှာ တမင် ထည့်ရေးလေ့ရှိတယ်လို့ ၂၀၁၂ ခုနှစ်က မြန်မာပြည်ကို သူအလည်လာခဲ့စဉ် ကျင်းပတဲ့ ကဗျာ workshop မှာ ပြောပြသွားခဲ့ပါတယ်။ flarf ကဗျာကို လိုက်စားကြတဲ့ PEM Skool က ကဗျာဆရာတွေရဲ့ ကဗျာတွေထဲမှာ ဒီလို စကားလုံးတွေ တွေ့နိုင်ပါတယ်။ တချို့က သဘာဝကျအောင် လိုအပ်တယ် ထင်လို့ ရေးသားကြတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ facebook ခေတ်မစားခင် blog တွေထဲမှာ ကဗျာဆရာ မြေမှုန်လွင်ရဲ့ “သဘောပေါက်တဲ့အခါ ရီဝေမှုတွေနဲ့ မျှော်နေမှာပေါ့” ဆိုတဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ကြောင့် အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၁၂ ဧရာဝတီစာပေပွဲက ဆွေးနွေးပွဲတစ်ခုမှာတော့ ဆရာမြေမှုန်လွင်က သူ့ရဲ့ရေးသားမှုတွေဟာ တကယ်တော့ realism တွေဖြစ်ကြောင်း၊ လူငယ်တွေရဲ့ အပြင်လက်တွေ့လောကမှာ ပြောဆိုနေကြတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေ၊ ဖြစ်ပျက်နေကြတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေကို သူက အရှိအတိုင်း ပြန်ပြောပြခြင်းသာဖြစ်ကြောင်း ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။
လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပွင့်လင်းရဲတင်းတဲ့ အသုံးအနှုန်းတွေ၊ အရိုအသေ ကင်းမဲ့တယ်လို့ ယဉ်ကျေးမှုအရ သတ်မှတ်ကြတဲ့ ပြောဆိုမှုတွေ၊ ဆဲရေးတယ်လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ စကားလုံးမျိုးတွေကို အင်တာနက်ထဲက ကဗျာအချို့မှာ တွေ့မြင်နေရပါတယ်။ လူငယ်အမျိုးသားတွေသာမက လူငယ်အမျိုးသမီးတွေပါ ဒီလို ရေးသားနေတာကလည်း အထူးအဆန်း မဟုတ်တော့ပါဘူး။ ကဗျာဆရာမ ချိုပိန်းနောင်ရဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို တင်ပြလိုက်ပါတယ်။
အမေဟာ တစ်နှစ်မှာ တစ်ခါလောက်ကျမတို့ကို စောက်ဆန်းကြီးတွေ လုပ်လုပ်ပြတယ်
လုပ်ပြတိုင်းလည်း ကျမတို့ ထင်မထားတဲ့ရက် ထင်မထားတဲ့ အချိန်တွေမှာချည့်ပဲ
အခုလည်း လွန်ခဲ့တဲ့ ၈ ညက ကျမကဗျာစာအုပ်တစ်အုပ်လက်ဆောင်ရလာတယ်
တစ်ခါမှ ကဗျာမဖတ်တဲ့ အမေက ပြစမ်းဆိုပြီး စာအုပ်လာလှန်တယ်
ကျမပြလိုက်တော့ ငါဝယ်မယ်ဆိုပြီး ပိုက်ဆံပေးသွားတယ်
နောက်ရက်တွေမှာ သူနဲ့အတူအိပ်နေကျ အဖေနဲ့ မအိပ်တော့ဘူးဆိုပြီး အဖေ့ကို ကုတင်ပေါ်က မောင်းချတယ်
အဖေက စောက်ဆန်းကြီးဖြစ်ပြီး အပြင်ကို ထွက်အိပ်တယ်
အမေက နှစ်ယောက်အိပ်ကုတင်ပေါ်မှာ အကျအနမှောက်
ဘေးက မှန်အိမ်ကို မီးစာအဆုံးထိမြှင့်ပြီး
ဖတ်ရင်း ဖတ်ရင်း တစ်ခါတစ်လေ အင်း အင်းဆိုပြီး သူ့ဟာသူ စာအုပ်ကို ခေါင်းတွေညိတ်ပြတယ်
ကျမက တံခါးကြားက ခိုးကြည့်နေတော့ သူဘာလုပ်လဲမြင်ရတယ်
တစ်မနက်ကျ ဒီစာအုပ်ထဲ နင့်ကဗျာတွေပါတယ် ဒီလိုမှန်းသိ ငါမ၀ယ်ပါဘူးဆိုပြီး အတင်းလာပြန်ပေးတယ်
ကျမပြန်ပေးလိုက်တော့ အင်တင်တင်နဲ့ ပြန်ယူသွားတယ်
နေ့လယ်စာ စားပြီးတော့ သူကျမကိုလာပြောတယ်
ကျမနဲ့ သိပ်မသိတဲ့ ကဗျာဆရာတွေဆီ ကျမသွားတယ်
ဒီမှာ လက်မှတ်တွေပါလာပြီ လာကြည့်စမ်းလို့ အိမ်ရောက်ရင် ပြောလိုက်မယ်လို့ ၀မ်းသာပြီး ကျမအားခဲလာတယ်
အိမ်ပြန်ရောက်တော့ ဒီမှာလက်မှတ်တွေပါလာပြီ လာကြည့်စမ်းလို့ ကျမသူ့ကိုပြောလိုက်တယ်
ကျမ သူ့ကိုကြည့်ပြီး သူပြောတဲ့နေရာမှာ စာအုပ်ချထားပေးလိုက်တယ်
သူ့သတင်းကိုလည်း ကျမ မကြားဘူး
ညဘက်ရောက်မှ အမေမှန်အိမ်ကိုင်နေမှ သတိရပြီး သူ့ကို မေးလိုက်တယ်
အေး ငါမေ့နေတာ ရှိတယ် ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်
ဆိုပြီး ကဗျာစာအုပ်ကို မီးဖိုချောင်ထဲက သွားဆွဲထုတ်လာပြီး အနောက်ဖက်ထွက်သွားတယ်
ကျမ သူဘာလုပ်မလဲသိရအောင် သူ့နောက်လိုက်သွားတယ်
အိမ်နောက်က မြေကွက်လပ်မှာ သူစာအုပ်ကိုချတယ်
လေတိုက်နေတော့ စာရွက်တွေက တဖျတ်ဖျတ်လန်နေတယ်
ကဗျာဆရာတွေရဲ့ လက်မှတ်မည်းမည်းတွေကို လရောင်အောက်မှာ မည်းမည်းမြင်ရတယ်
စာအုပ်ကိုကြည့်နေတော့ သူ့လက်ထဲက ရာဘာတုံးလေးနဲ့ မီးခြစ်ကို သတိမထားမိဘူး
ပြီးတော့ စာအုပ်တကယ်ပြာကျ မကျ ပြန်ကြည့်တယ်
ပြာကျသွားတော့ မီးလောင်စာတွေကို ရေနဲ့ပြန်ပက်တယ်
ငါ့စာအုပ်လေး နှမြောစရာလို့ သူရွတ်တယ်
အမေဟာ ဒီအချိန်ဆို တရှူးရှူးအိပ်ပျော်နေမှာပဲ
(3/28/15) (Saturday) (11:16 PM)
(Thanks Mom. I inspired you! )
ရိုးရှင်းတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ ရေးထားတဲ့ ချိုပိန်းနောင်ရဲ့ ကဗျာမှာ အဓိက ဆန်းပြား အငြင်းပွားဖွယ် အချက်ကတော့ အနန္တဂိုဏ်းဝင်လို့ မြန်မာ့ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ၊ အထူးသဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာအရ သတ်မှတ်ထားတဲ့ မိခင်ကို ဆဲရေးတဲ့စကားလုံးလို့ သတ်မှတ်ကြမဲ့ ဘန်းစကားတစ်ခုနဲ့ ယှဉ်တွဲထားတာပါပဲ။ ရှေ့မှာ ဖော်ပြခဲ့သလို ကဗျာ့ရည်ရွယ်ချက်က အရေးကြီးပါမယ်။ ကဗျာပါ အကြောင်းအရာဟာ တကယ့်အဖြစ်အပျက်နဲ့ ဆက်စပ်နေပါတယ်။ သိရသလောက် ချိုပိန်းနောင်ရဲ့ အမေဟာ ကဗျာစာအုပ်ကို ဖတ်တာ၊ ကဗျာဆရာတွေကို လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတာ တကယ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကဗျာတစ်ပုဒ်လုံးကို အတည်ယူဖို့ကတော့ ခက်ပါတယ်။ ယနေ့ခေတ်မှာ မသုံးတော့တဲ့ မှန်အိမ်နဲ့ စာဖတ်တယ် ဆိုတာ ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင် ဆိုတာကို သတိပြုမိတဲ့အခါ၊ အမေက စာအုပ်ကို မီးရှို့တယ်ဆိုတာကလည်း တကယ် ဖြစ်ခဲ့တာ ဟုတ်မဟုတ်၊ ဒါဆိုရင် ကဗျာထဲမှာ မိခင်ကို မလေးစားတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ အငြင်းပွားဖွယ် ဝေါဟာရကို သုံးလိုက်တာရော ဟုတ်ပါ့မလား၊ ဆရာမြေမှုန်လွင်ပြောခဲ့သလို ဒီဝေါဟာရဟာ ယနေ့ခေတ် လူငယ်တို့ကြားမှာ သာမန်အသုံးတစ်ခုမို့ ပြောဆိုနေကျ သဘာဝအတိုင်း ထည့်သွင်းထားသလား ဆိုတာကို စဉ်းစားစေပါတယ်။ တကယ်လို့ ဆဲရေးလိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ရေးခဲ့တယ်ဆိုရင်ရော၊ ဒါဆိုရင် လူငယ်တွေရဲ့ စံတန်ဖိုးတွေကို နားလည်ဖို့ လိုအပ်လာပါပြီ။
မူဝါဒရေးဆွဲသူတွေ၊ ယဉ်ကျေးမှု ထိန်းသိမ်းသူတွေ၊ ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေ၊ ဒါမှမဟုတ် ခေတ်သစ်အဖွဲ့အစည်းကို အားပေးလိုသူတွေ၊ တီထွင်ဆန်းသစ်လိုသူတွေ၊ အမျိုးမျိုးသော ဝါဒရေးရာတွေအတွက်တော့ ဒီတွေ့ရှိချက်အပေါ်မှာ ကဲ့ရဲ့ခြင်း၊ တားမြစ်ခြင်း၊ တိုက်တွန်းခြင်း၊ ချီးကျုးခြင်း စသည်ဖြင့် ဘက် တစ်ဘက်ဘက်ကနေ တစ်ခုခု အရေးယူဆောင်ရွက်ကောင်း ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်။ လေ့လာသူအတွက်ကတော့ ဒီလို အရေးအသားတွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ တွေ့ရှိချက်ကို အင်တာနက်ထဲက ကဗျာအချို့ရဲ့ စရိုက်လက္ခဏာ အချက်အလက်တစ်ခုအဖြစ် မှတ်သားရုံသာ ဖြစ်ပါတယ်။
(နှင်းဆီဖြူဂျာနယ် အမှတ် ၅ တွင် ဖော်ပြပါရှိပြီး)
Posted by pandora at 7:38 PM4comments
Labels: essay, poem, review
ပထမဦးဆုံးခဈြသူ..... - ကိုစညျသူရဲ့ ဒီသီခငျြးကိုနားထောငျဖူးခဲ့တာ သူစုံတှဲထှကျခဲ့ဖူးတဲ့ စီးရီးတဈခှကေပဲ... ခှနောမညျမမှတျမိတော့ဘူး....။ သူ့အရငျက ဘိုဘိုနဲ့ခြောစုခငျဆိုခဲ့ဖူးပွ...
Thich Nhat Hanh-Please Call Me By My True Names (ပါဠိ) - Please Call Me by My True NamesThich Nhat Hanhပါဠိဘာသာပွနျ – နတ်ထိ Audio Link > Here Poetry Line > Here